मलिना र अनुपको प्रेममा को थियो तेश्रो व्यक्ति ?
June 29, 2017	Comments Off on मलिना र अनुपको प्रेममा को थियो तेश्रो व्यक्ति ?
आखिर तेश्रो व्यक्ति को थियो वा थिइन्, जसले गर्दा अभिनेता अनुपविक्रम शाही र अभिनेत्री मलिना जोशीको प्रेम टुट्यो । अभिनेत्री जोशीले आफू नै कमजोर बनेपछि तेश्रो व्यक्तिलाई किन दोष दिनु भनेसँगै यो कुरा खुलेको हो । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित कुराकानीमा मलिनाले अनुपको प्रेममा आफू कमजोर भैसकेको पनि बताएकी छिन् । …
भिडियो छाडेपछि बढ्यो त बर्षाको फेस भ्यालू ?
June 29, 2017	Comments Off on भिडियो छाडेपछि बढ्यो त बर्षाको फेस भ्यालू ?
कुनै समय अभिनेत्री बर्षा सिवोकाटी म्यूजिक भिडियो त रानी नै मानिन्थिन् । तर, अहिले उनले भिडियोमा काम गर्न कम गरिसकेकी छिन् । बषर्ाको हातमा केही फाट्टफुट्ट फिल्म परिरहेका हुन्छन् । यसैले पनि उनी भिडियोमा कम काम गरिरहेकी छिन् । रिभर्ज बस्न रुचाउने यी अभिनेत्री गसिपका कारण हिट हुनु पनि छैन …
मेहेन्दी लगाउने नीशा, हेर्ने शरद
June 29, 2017	Comments Off on मेहेन्दी लगाउने नीशा, हेर्ने शरद
असार १६ गते वैवाहिक जीवनमा बाधिन लागेकी अभिनेत्री नीशा अधिकारी अहिले फुरुङ्ग छिन् । उनलाई अहिले साथीहरुको शुभकामना लिन भ्याई नभ्याई छ । साथै, बिहेको चटारो पनि अर्कोतिर । वुधबार अभिनेत्री नीशा अधिकारीले हातमा शरदको नामको मेहेन्दी लगाइन् । नीशालाई वधाई दिनका लागि अभिनेत्री तथा मोडल वेनिशा हमाल, मोडल रीमा …
Page 1,000 of 1,366« First...9709809909989991,0001,0011,002»1,0101,0201,030...Last »